धनी बन्ने यी चार तरिका आजै फलो गर्नुहोस् यसो गर्नाले ठुलो धान लाभ मिल्छ । – Krazy NepaL
April 11, 2021 426
काठमाडौं । संसारमा हरेक मान्छेको एउटै चासो हुन्छ, धनी बन्ने,, पैसा कमाउने पैसा कसरी कमाउने ? सुख सयल कसरी प्राप्त गर्ने ? धेरैले वैध तरिकाबाटै धेरै भन्दा धेरै पैसा कमाउने सोच राख्छन् । कोही सफल हुन्छन् भने कोही असफल हुन्छन् । केहीले भने अवैध तरिकाले पैसा कमाएका हुन्छन् । तर त्यसले उनीहरुलाई शान्ति भने मिल्दैन । जति पैसा कमाउन थाल्यो तेतिनै तनाब थपिदै जान्छ।
संसारमा अवैध तरिकाले पैसा कमाउने कामले भने सुख होइन, तनाव मात्रै दिने गरेको छ । किनभने उ एकदिन फस्छ, फस्छ । नेपाल जस्ता अल्पविकसित देशका नागरिकको सोचाई हुन्छ,- आफ्ना छोरा छोरीलाई राम्रो विद्यालयमा पढाउँ, आफ्नो एउटा सानो घर हाओस्, बिरामी पर्दा सामान्य उपचार गर्न पाइयोस् ।
समाजमा आनो प्रतिष्ठा हाओस् । धेरैको यस्तै चाहना हुन्छ । तर पैसा कमाउने विषय त्यत्ति सहज भने छैन । यसमा केही नयाँ सोच र तरिका जरुरी पर्दछ । संसारभरमा नै पैसा कमाउन नचाहने मानिस कमै होलान् । पैसा कमाउनका लागि कोशिसि पनि आवश्यक पर्दछ । त्यसका लागि सबैभन्दा पहिले आनो क्षमता बढाउनु जरुरी हुन्छ ।
पैसा कमाउने विषय सजिलो र सहज छैन । त्यसका लागि कडा मेहनत र डेडिकेशनको जरुरी पर्दछ । असाध्यै तल्लो तलबाट माथि उठेका संसारका ठूला मान्छेहरुले जीवनमा गरेको संघर्षका कथा पढ्नुस । दुःखबाट सफलता हासिल गरेर व्यक्तिको कथा र जीवन संघर्षले तपाईलाई प्ररित गर्दछ ।
तपाईको क्षमता बढाउन र मेहनत गर्नका लागि त्यसले तपाईलाई प्रेरित गर्दछ । वारने बफेट हुन वा अमेजनका मालिक वा रिलायन्स इन्डस्ट्रिजका मालिक मुकेश आम्बानीले सपना देखेका कारण नै सफलता हासिल गरेका हुन् । कुशलतापूर्वक सफलता हासिल गर्न सकिन्छ । सफलता हासिल गर्नका लागि तपाई सधै तत्पर समेत हुनुपर्दछ । तपाईको सपना पूरा गर्न कडा मेहनत गरेपछि त्यसले मात्रै स्वर्णिम भविस्यको उज्यालो स्म्भावना तय गर्न सक्छ ।
Prevयस्ता महिलालाई हुन्छ पाठेघरको मुखको क्यान्सर देखिन्छ यस्तो लक्षण
Nextशक्तिशाली देवीको मन्दिर जहाँ ऐनाले मात्र भरी भरीभराउ गरि राखिएको छ, हेला नगरी ॐ लेखी भेटी स्वरुप सबैले सेयर गरौ
छालामा चायापोतो दागधब्बा तथा रुखोपन देखियो ? हुनसक्छ यस्तो समस्या
चुच्चो नाक हुने महिला हुन्छन् निकै वुद्धिमानी, नाकबाटै यसरी थाहा पाउनुहोस् भाग्य
यस्ता संकेत देखिए हुन्छ धन लाभ, तपाईले पनि पाउनुभयो की ?